I-Samsung Galaxy S11: ikhamera yayo iveze umbulelo kuXiaomi | I-Androidsis
Sele kudlule iinyanga ezingaphezulu kwesithandathu I-Samsung Galaxy S10 yatyhilwa. Kuyabonakala, umenzi waseKorea sele esebenza Kwindlalifa yeflegi yangoku yosapho lweGlass S, imodeli enokuthi iboniswe isetyenziswe kwisakhelo esifanelekileyo seNkomfa yeHlabathi yeHlabathi ka-2020. Phantsi kwegama lekhowudi uPicasso, Samsung Galaxy S11 ufuna ukukhokela isiphelo esiphezulu kwakhona.
Ewe kuyinyani ukuba kusekutsha kakhulu ukuba ungathetha nge-Samsung Galaxy S11, okanye mhlawumbi akunjalo. Ngale ndlela, ukongeza kokwazi ezinye iinkcukacha ezisisiseko, ezinje ngokuba iya kuba nomfundi ofaka iminwe odityaniswe kwiscreen sayo, ukongeza kwinto yokuba unxibelelwano lwe5G luya kuqheleka kuzo zonke iifowuni ezisungulwe ngo-2020, ngoku sazi into entsha idatha kwicandelo layo lokufota.
Ikhamera ye-Samsung Galaxy S11 iya kuba yinto eyinyani
Kwaye, kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, safumanisa ukuba iXiaomi kunye ne-Samsung badibene ukwenza iilensi ezili-108 ze-megapixel ngomthamo onomdla. Kule nto, kufuneka songeze ingxelo esemthethweni yeXiaomi Mi MIX Alpha, apho ifemu ithathe ithuba lokubonisa inkqubo yayo yekhamera engakholelekiyo, apho ilensi ye-megapixel eyi-108 yayiyeyona iphambili.
Ewe, kuyacaca ukuba ikhamera ye Xiaomi Mi MIX Alpha yeyona wayeyila kunye nomenzi osekwe eSeoul. Kwaye, njengoko ingenakuba yenye indlela, eyona nto iqhelekileyo kukuba ikhamera ye-Samsung Galaxy S11 ibhejele kule sensor inye ye-108 megapixel ukufumana intonga kwicandelo lokufota kwiHuawei P30 Pro kunye neMate 30 Pro ngaxeshanye.
Ngaphezulu kwayo nantoni na kuba, namhlanje i-Samsung ingaphantsi kweentshaba zayo ngokomgangatho wokuthinjwa. Hayi, i-Galaxy S10 okanye iNqaku 10 ayinayo ikhamera embi, kodwa icandelo labo lokufota alikude libe lelona lifanelekileyo. Ngaba baya kulawula ukuguqula iitafile nge Ikhamera ye-Samsung Galaxy S11?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » IXiaomi Mi MIX Alpha ityhila ikhamera ye-Samsung Galaxy S11
Ngaba i-Galaxy X engabizi kakhulu? Isamsung inokusebenza kuyo